Erik Severinghaus's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Erik Severinghaus
Erik anga achigadzira zvigadzirwa zvitsva uye achivaunza kumusika kwemakore makumi maviri, zvichikonzera mazana emamirioni emadhora ekubuda uye mari inogadzirwa. Asati atungamira zano pa ChitubuCM, Erik anga ari Muvambi uye CEO weR SimpleRelevance, chinzvimbo chakakurumbira chinodzidziswa muchina chekukwiridzira kushambadzira kwedigital. Muna 2015, SimpleRelevance yakatengeswa kuRise Interactive, uko Erik akatungamira iyo Akaundi Strategic uye Kuzvigadzirira zvikamu zvebhizinesi.
Chitatu, September 6, 2017 Erik Severinghaus
Mune zera rekushambadzira zvemukati, mishandirapamwe yePPC uye nharembozha, zvishandiso zvekare sepeni nebepa hazvina nzvimbo munzvimbo yanhasi ine simba yekushambadzira. Nekudaro, nguva nenguva, vashambadzi vanodzokera kuzvishandiso zvechinyakare zvemaitiro avo akakosha, vachisiya mishandirapamwe iri panjodzi yekukanganisa uye kusataurirana zvakanaka. Kuteedzera otomatiki workflows ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekubvisa kusakwana uku. Nezvishandiso zvirinani zviripo, vatengesi vanogona kunongedza uye kugadzirisa avo anodzokorora, akaoma mabasa,